Who were Bengali, so called Rohingya?: ဒေါက်တာဇာနည်ကို မေးမြန်းခြင်း (Rohingya ဟာ Terrorist ဟုတ်ပါသလား)
ဒေါက်တာဇာနည်ကို မေးမြန်းခြင်း (Rohingya ဟာ Terrorist ဟုတ်ပါသလား)
ပို့စ်တင်သူအာဘော်။ ဤပို့စ်ကို Yan Aung FaceBook မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ ပို့စ်နှင့်အတူ ကော်မန့်များကိုပါ တဆက်တည်းတင်ပေးလိုက်ပါသည်။ ဤပို့စ်တွင် ဘင်္ဂလီကုလားများ၏ အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်များကြောင့် ဒေသခံတို့ သေကြေပျက်စီးရသည့် ဓာတ်ပုံများပါရှိပါသည်။ (သွေးလန့်တတ်သူများ မကြည့်သင့်ပါ။)
အခု ကျွန်တော်တင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာက ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ရခိုင်ပြည်ထဲကို ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ စိမ့်ဝင်ပျံနှံ့ စတင်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ တကမ္ဘာလုံးက အလေးထားနေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ အထောက်အထားတွေပါ..။
ရိုဟင်ဂျာအကြမ်းဖက်မှုရဲ့ မူလအစ မူဂျာဟစ် ဘင်္ဂါလီတွေ မြန်မာပြည်တွင်း လာရောက်အလုပ်လုပ်ချိန် ..။ ၁၉၄၂အင်္ဂလိပ်တွေပြန်ဆုတ်ချိန်တွင် အလယ်သံကျော်ရွာအဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီရွှာကြီးဟာအရင်က ရခိုင်ရွာကြီးပါ..။ ၁၉၄၂ခုနှစ် အင်္ဂလိပ်အဆုတ်၊အုပ်ချုပ်ရေးမဲ့နေချိန်မှာဖြစ်တဲ့ အဓိကရုဏ်းမှာ အိမ်ခြေ၂၀၀ကျော်ရှိတဲ့ အလယ်သံကျော်တစ်ရွာလုံးမီးလောင်ပြာကျသွားခဲ့ရပါတယ်..။ အဲဒီတုံးက ရခိုင်တွေက တောင်ကိုကျော်ပြီး ဘူးသီးတောင်၊ ရသေ့တောင်ဘက်ကို ပြေးဖို့ ကြိုးစားတယ်..။ အင်္ဂလိပ်က V force ဆိုပြီး ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ပေးခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေက လက်နက်ရတော့ ရွာတွေကို ဖျက်တယ်..။ ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ရခိုင်တွေကို တောင်ကျော်လမ်းတွေက စောင့်သတ်တယ်..။ ဒါ့ကြောင့် ရခိုင်တွေကစစ်တွေဘက်ကို မပြေးနိုင်ဘဲ အိန္ဒယပြည်က ဒိန္နာပူရ်ဘက်ကို ထွက်ပြေးရတယ်..။ အဲဒီမှာ ရခိုင်၄၀၀၀ လောက်ကို အင်္ဂလိပ်ကဒုက္ခသည်စခန်း ထားတည်ပေးခဲ့ရတယ်။ အဲဒီသတ်မှုကြီးမှာ ရခိုင်သုံးသောင်းလောက် သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံ ရခိုင်တွေပြောကြားချက်အရ သိရှိရပါတယ်..။အဲဒီ အချိန်ကစပြီး အလယ်သံကျော်ဟာ ကုလားရွာဘ၀ရောက်သွားခဲ့ရပါ တယ်..။ နောက်တော့ ဂျပန်အုပ်ချူပ်မှုစတင် တဲ့အခါမှာတော့ ရခိုင်တွေကို သတ်တဲ့အဲဒီဘင်္ဂါလီတွေဟာ ဘာသာရေးအသွင်ပြောင်း ဂျမေယာတူ-အိုလမာအသင်းဆိုပြီးဖွဲ့လိုက်ကြပါတယ်.။ အနောက်ပါကစ္စတန်(ယခုပါကစ္စတန်)မှ ဘာသရေးအစွန်းရောက် အော်လနာမူဟာမတ် မူဇဟတ်ခန်နှင့် မော်နာအီဗြာဟိန်း တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီး မူဂျာဟိန်းအဖွဲ့ ဖွဲ့လိုက်ပါတယ်..။ သူတို့ရည်ရွယ်ချက်က ပါကစ္စတန်ထဲကို ရခိုင်ပြည် ထည့်သွင်း ရေးပါပဲ..။
ရခိုင်တွေအခေါ်တော့ မူဂျာဟစ်၊ စစ်တပ်အခေါ်(ကုလားဆိုး) လို့ခေါ်ကြတယ်..။ လွတ်လပ်ရေးရအပြီးမှာ ဗူးသီးတောင်မောင်းတောကို သိမ်းထားတဲ့ မူဂျာဟစ်တွေကို စစ်တပ်ရောက်လာပြီး စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တော့ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီး ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုဝင်တိုက်တဲ့ ရခိုင်အမျိူးသားတွေရဲ့ ပူးပေါင်းမှုနဲ့ တိုက်ခိုက် အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်..။
အဲဒါနဲ့ပဲ မစ္စတာဂေါ်ဖားဆိုသူက ရိုဟင်ဂျာဆိုပြီး လူမျိုးသစ်တခုကို ၁၉၅၀- စက်တင်ဘာလထုတ် ဂါဒီးယန်းသတင်းစာတွင် အသက်သွင်းပေးလိုက်တယ်..။ အဲဒါ ရခိုင်ပညာတတ် တော်တော်များများ သိနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာရဲ့ အစ ပါ..။
အဲဒီ အရေးအခင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ အလယ်သံကျော်ရွာမှာ ၁၉၅၁ ဇွန်လမှာ အစ္စလာမ်ညီလာခံကျင်းပပါတယ်..။ ဒီညီလာခံကို ဦးနုရဲ့ ဖဆပလအမတ် ဆူလတန်မာမွတ်ခေါင်းဆောင်တဲ့ ဘင်္ဂါလီနွယ် ပါလီမန်အမတ်တွေက စီစဉ်တာပါ..။ အဲဒီညီလာခံမှာ ရခိုင်မှာ အခြေကျစပြုနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေက အောက်ပါအချက်တွေကို တောင်းဆိုပါတယ်..။
(၁) ရခိုင် မြောက်ပိုင်းကို ကရင်၊ ချင်း၊ ကရင်ဒေသတွေလို လွတ်လပ်သော အစ္စလာမ်ပြည်နယ်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းရန်၊ ပြည်နယ်စစ်တပ်၊ ပြည်နယ်ရဲ၊ ပြည်နယ်လုံခြုံရေး စသည်ဖြင့် ခါးပိုက်ဆောင်တပ် ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုရန်..။
(၂) စစ်တွေမြို့ကို ရခိုင်တောင်ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်း ပူးတွဲမြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ရန်၊ မြို့တော်နှင့် ဆိပ်ကမ်းကွပ်ကဲမှုအား ရခိုင်နှင့် မူဆလင် ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဆီ အုပ်ချုပ်ရန်၊ ပထမဆုံး မြို့တော်ဝန်နှင့် တိုင်းမင်းကြီးအား ၄င်းတို့ဘက်မှ ခန့်ထားရန်..။
(၃) ရခိုင်ပြည် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွင် မူဆလင်ဘာသာဝင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ရန်..။
(၄) ဗဟိုအစိုးရတွင် မူဆလင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး ခန့်ထားရန်..။
(၅) လူမျိုးစုလွှတ်တော်သို့ အခြားပြည်နယ်များနည်းတူ ကိုယ်စားလှယ်အညီအမျှ စေလွှတ်ရန်
(၆) မူဆလင်ကောင်စီ ထားရှိခွင့်ပြုရန်..
(၇) မူဆလင်အထက်တန်းကျောင်းနှင့် ကောလိပ်များတည်ထောင်ခွင့်ပြုရန်.။ ဆိုတဲ့ အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်..။
အဲဒီညီလာခံမှာ ရခိုင်ရောက်ကုလားများက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရခိုင်မွတ်စလင် (ရခိုင်ကုလား)ဟုသော အသုံးအနှုန်း စတင်သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ရခိုင်များက “ရခိုင်လူမျိုးဟာ ဘယ်တော့မှ မွတ်စလင် မဖြစ်ခဲ့ဘူး” လို့ ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက် မူဂျာဟစ်၊ ရခိုင်မူဆလင် ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းအစား ရိုဟင်ဂျာဆိုပြီး ဘင်္ဂါလီတွေက နာမည်တစ်ခု သုံးနှုန်းခဲ့တာပါ..။
နောက်တော့ ဖဆပလ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တော့ သန့်ှရှင်းဖဆပလ(ဦးနု) ကိုမဲပေးတဲ့အတွက် ဘင်္ဂလီတွေကို မေယုပြည်နယ်အစား မေယုခရိုင်ဖွဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်..။ အဆိုးဆုံးကက မှတ်ပုံတင်တွေ လိုသလောက် ထုတ်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်..။ ၁၉၇၈ နဂါးမင်းစစ်ဆင်ရေး နဲ့ ဟင်္သာစစ်ဆင်ရေးတွေမှာ ခိုးဝင်လာသူမှန်းသိပေမယ့် မှတ်ပုံတင်တွေရှိနေတော့ ဘာမှ မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး..။
ရိုဟင်ဂျာများ၏ ဘာသာရေးဘက်ကို စတင်လွမ်းမိုးသော ယုတ်မာမှု။
၁၉၈၅ ခုနှစ်ခန့်က ရိုဟင်ဂျာလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ အာမက်ရှား ရဲ့ ဘူးသီးတောင်-မောင်တော ဘက်မှာ ဘင်္ဂါလီတွေကို ဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့ကက်ဆက်ခွေကြောင့် အဓိကရုဏ်းဖြစ်လုနီးပါး ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်..။ အဲဒီအခွေနဲ့ လက်ကမ်းကြောငြာမှာ မေယုဒေသက အစ္စလာဘာသာဝင် မဟုတ်သူတွေကို ဒေသက ထွက်သွားရန် မောင်းထုတ်ဖို့နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်မှာ ဖြန့်တဲ့ လက်ကမ်းကြော်ငြာမှာ ရခိုင်မိန်းမပျိုလေးများ ပုံကို ဖော်ပြထားပြီး သင်တို့နေထိုင်ရာဒေသတွင် အစာရှားပါးသည်..။ သင်တို့နေရာ၏ တစ်ဖက်ကမ်း မြန်မာဘက်တွင် ဆန်နှင့် အစားအစာ ပေါများလှသည် ။ လမ်းဘေးတွင် လုံခြည်ရင်လျားနှင့် ရေခပ်နေသော အမျိုးသမီးလေးများကို တွေ့နိုင်သည်..။ သင်တို့ အစာဝအောင်စားဖို့ ထိုနေရာသို့သွားကြ။ အမျိုးသမီးလေးများ ကို အိမ်ထောင်ပြုပြီး အစ္စလာမ်သာသနာ ပြန့်ပွားအောင်လုပ်ကြ .. လို့ ဖော်ပြ ထားပါတယ်..။ အဲဒီစာတွေနဲ့ ကက်ဆက်ခွေတွေကြောင့် အဓိကရုဏ်းဖြစ်လုနီးပါး ဖြစ်သွားပါတယ်..။ မဆလ အာဏာပိုင်တွေက ၀င်ထိန်းလို့ .. ပွဲပြီးသွားခဲ့ပါတယ်..။
ပြည်တွင်းမှာ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ စတင်ချိန်နဲ့ အချိန်ကိုက်အခွင့်ကောင်းယူပြီး ၁၉၈၈ မေလ ၁၃ ရက်နေ့ မောင်တောမြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘင်္ဂါလီကုလားရွာများမှ ကုလား ငါးသောင်းလောက်က ဓားလှံ လက်နက်မျိုးစုံကိုင်ဆောင်ကာ လူအားကိုးနဲ့ မောင်းတောမြို့နယ်ကို ၀င်စီးဖို့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်..။ ၄ ရပ်ကွက် ဘုန်းကြီးကျောင်း အဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပါတယ်..။ ရခိုင်ရပ်ကွက်တွေကိုဝိုင်းပြီး မီးရှို့ဖို့ ကြံစည်ခဲ့ပါတယ်..။ မောင်းတောရဲစခန်းနဲ့ ဘူးသီးတောင်မောင်တော လမ်းမမှာရှိတဲ့ လုံထိန်းတပ်မှ အချိန်မီရောက်ရှိလာပြီး အတင်းဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ကာကွယ်ခဲ့တဲ့အတွက် မြို့ကို ကယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်..။ တောင်ကြီးနဲ့ ပြည် တို့မှာ ကုလား ဗမာ ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တာကို အခွင့်ကောင်းယူတာဖြစ်ပါတယ်..။ အဲဒီအဖြစ်တွေအားလုံးဟာ .. အဖြစ်အမှန်တွေပါ..။ ဒေသခံ ရခိုင်တွေကို စုံစမ်းလို့ရပါတယ်..။
(ရှစ်လေးလုံးအပြီး ရိုဟင်ဂျာကို နိုင်ငံတကာ ဇာတ်ခုံပေါ် တင်ပေးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ အထောက်အထားတွေ ကိုတော့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ သီးသန့်တင်ပြပါ့မယ်..)
၁၉၉၂ ခုနှစ်က ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်ကြမ်းဖက်မှုကိုကြိုတင်တားဆီးနိုင်ခြင်း..။ (ကိုယ်တွေ့ကြုံသူတစ်ဦး ရေးသားချက်)
တချိန်တုန်းက ၁၉၉၂-၉၃ လောက်က ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ သူပုန်တွေကို နအဖ အစိုးရတပ်က ပြုတ်လုနီးပါးတိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်....သူတို့က ..မောင်တောမြို့နယ် အလယ်သံကျော်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်ကနေတစ်ဆင့်..လူ ၁၅၀၀ လောက်စက်လှေတွေနဲ့ဝင်လာတယ် လက်နက်မပါပဲနဲ့ပေါ့..ဒီဘက်ကသူတို့အနွယ်တွေဆီကို လက်နက်ကျည်ဆံတွေကား ၇စီးတိုက်စာလောက် ကြိုပို့ထားတယ်လေ
တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ........ကျောက်ပန်းနု ရွာဘက်က လှိုဏ်ဂူတစ်ခုထဲမှာဖွက်ထားတဲ့ လက်နက်တိုက်ကိုလဲသိမ်းမိပါတယ်၊ လက်နက်တွေအများကြီးလို့ဒေသခံတွေဆီကသိရပါတယ်
အဲဒီတုန်းကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ ကိစ္စ မီဒီယာတွေအေရမ်းအော်ခဲ့ကြပါတယ်....ဘီဘီစီ နဲ့ အာအက်ဖ်အေ အသံအကျယ်ဆုံးပါ............
နောက်တစ်ချက်ကတော့ အမေရိကန်က အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး စစ်ပွဲဆင်နွဲနေစဉ်မှာ ရိုဟင်ဂျာ တွေဟာ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိပြီး ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့အထောက်အထားတွေကို ရရှိခဲတဲ့ အချက်တွေပါ..။ အဲဒါတွေကို ၂၀၁၁ သြဂုတ်မှာ ပေါက်ကြားလာတဲ့ wikileak ကြေးနန်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်..။
အဲဒီဖော်ပြချက်တွေထဲက တချို့ကို ဘာသာပြန်ပြရရင်..။
ARNO အဖွဲ့ဝင် 19 ဦးဟာ လစ်ဗျားနှင့် အာဖဂန် နစ်စတန်တွင် 2001 သြဂုတ်လတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြောက်ကျားစစ်သင်တန်း၊ အမျိုးမျိုးသော ဖောက်ခွဲရေးသင်တန်း၊ လက်နက်ကြီး သင်တန်းများအား တက်ရောက်ရန် ရွေးချယ်ခံခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အဖွဲ့ဝင်များထဲမှ 13 ဦးဟာ ဖောက်ခွဲရေးနှင့် လက်နက်ကြီးသင်တန်းများမှာ ပူးပေါင်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ Zai-La-Saw-Ri စခန်းတွင်ရှိသည့် ARNO ရုံးချုပ်သို့ တာလီဘန် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသည့် အယ်ဟာဆက်နှင့် အယ်ဂျာဟစ်တို့ဟာ 2001 နိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့တွင် RSO ၏ Kann-Grat-Chaung စခန်းမှ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
တိုင်းတပါး အဆက်အသွယ်ဖြစ်သည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ဘာဒါဘန်၊ GOB မှ စုံစမ်းဆဲဖြစ်သည့် ဟာဆာအာမက်နှင့် နိုင်ငံခြားသားနှစ်ယောက်တို့ဟာ Zai-La-Saw-Ri စခန်းရှိ ARNO ရုံးချုပ်သို့သွားရောက်ခဲ့ပြီး Salein တပ်သားများ၏ အကြီးအကဲ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှု တာဝန်ခံနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
wikileak တွင်ပါဝင်သော အမေရိကန်အစိုးရမှ အကြမ်းဖက်သမားခေါင်းဆောင်ဟု သတ်မှတ်ထားသည့် Nurul Islam
(အင်္ဂလန်ရောက်ပြီး ကြောင်သူတော်ယောင်ဆောင်ထားသော လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်ARNO ဥက္ကဌ Nurul Islam နှင့် ရိုဟင်ဂျာအား မြန်မာတိုင်းရင်းသားအဖြစ် သွတ်သွင်းရန်ကြိုးစားနေသည့် ဟန်ညောင်ဝေ တို့အား တွေ့ရပုံ)
နောက်ပြီး အဲဒိလို ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ရေးသားတင်ပြချက် တွေကို အောက်ပါ link တွေမှာ ဖော်ပြထားတာကို လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်..။ ရေးသားတဲ့သူတွေထဲမှာ Eastern Economic Review မှ ကမ္ဘာကျော် စာနယ်ဇင်းဆရာ Bertil Lintner လည်း ပါဝင်ပါတယ်..။
အောက်က စာအုပ်က University Of California က ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေပြဌာန်းထားတဲ့ History Of Terrorism ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ ပါတဲ့ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းပါ..။
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းက အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာလည်း Rohingya တွေ ပါဝင်ပတ်သတ်ကြောင်း အထောက်အထား တွေရှိပါတယ်..။ ယခင် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဘီဆစ်ကိုယ်တိုင် စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ အဖြစ်တွေပါ..။ အာက်ကလင့်တွေမှာ လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်..။
ဧရာဝတီ သူ့အတွေး သူ့အမြင်မှာ မှာ ကိုအောင်တင်က ထိုင်းတွေ ရိုဟင်ဂျာတွေကို လှေနဲပြန်မောင်းထုတ်တာကို အပြစ်တစ်ခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်..။ ရိုဟင်ဂျာတွေကြောင့် ထိုင်းတောင်ပိုင်းမှာ စစ်တေသွေးကြွတွေ ထပ်တိုးလာတာကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့တာလား.. .မတွေးခဲ့တာလား..။
နောက်ဆုံးဗျာ Google မှာ rohingya terrorism/ Rohingya treeorist လို့သာ ရိုက်ပြီး ရှာလိုက် .. အထောက်အထားတွေ၊ သတင်းတွေ၊ ဆောင်းပါးတွေ၊ebook တွေ တန်းစီပြီး ထွက်လာလိမ့်မယ်..။ လက်ညိုးထိုးမလွဲဘူး..။ အဲဒါကိုတော့ အာမ ခံ ပါတယ်..။ လေ့လာလို့ မဆုံးဘူး.။
အခု တင်ပြထားတဲ့ အပေါ်က သမိုင်းတွေနဲ့ တကမ္ဘာလုံးက သတင်းတွေဆောင်းပါးတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် ၀ါဒဖြန့်ထားတဲ့အချက် တစ်ခုမှ မပါပါဘူး..။ အဲဒါတွေက စစ်တပ်ကရေးတာမဟုတ်သလို၊ ဒီမိုတွေရေးတာ လည်းမဟုတ်ဘူး..။ တကမ္ဘာလုံးက စုပြီးသုံးသပ်ထားတဲ့ အထောက်အထားတွေပဲ.။ ရခိုင်က အရေးအခင်းတွေ သမိုင်းတွေကိုလည်း ဒေသခံရခိုင်ရှေ့မှီနောက်မှီတွေကို စုံစမ်းလို့ရပါတယ်..။
အဲဒီတော့ အဲဒီလို သမိုင်းမှာ သူတို့အတွက် ဒေသတစ်ခုရဖို့ ငွေကြေးအင်အား၊ NGO တွေအင်အား၊ မီဒီယာအင်အားနဲ့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဟာ.. သိုးယောင်ဆောင်တဲ့ ၀ံပုလွေဆိုတာ ထင်ရှား နေပါတယ်..။ အစိုးရက လူ့အခွင့်အရေးအရ နိုင်ငံသားအဖြစ် ခွင့်ပြုခဲ့ရင်တောင် နောင်ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်တွေကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကိုင်တွယ်ဖို့ လိုပါတယ်..။
သိပ်မကြာခင်က ၂၀၁၁ ဇူလိုင် ၃၀ ရက်နေ့က စစ်တကောင်းတောင်တန်းဒေသမှာ ရခိုင်မိန်းကလေးငယ် တစ်ဦး ကို အဓမ္မပြုကျင့်တာကို သူ့ရဲ့ မိဘမောင်ဘွားတွေက ကာကွယ်ရင်း ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ အသတ်ခံ လိုက်ရတဲ့ သုံးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှု ဖြစ်သွားပါတယ်..။
ဘင်္ဂါလီများ၏ ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံရသည့် ကလေးငယ်
ဇူလိုင်လ အတွင်းက မုဒိမ်းကျင့်ရန် ကြိုးပမ်းခံရသည့် အမျိုးသမီးပုံ
ကာကွယ်ရင်း ရက်စက်စွာ အသတ်ခံရသည့် အမျိုးသမီး၏ မိဘမောင်ဘွားများ
အဲဒါကို ဘယ်မီဒိယာ၊ ဘယ်သတင်းဌာနကမှ တိတိကျကျမဖော်ပြခဲ့ကြပါဘူး..။ ပြည်တွင်းမှာကလည်း မြန်မာပြည်ထဲရောက်လာတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေကို ရိုဟင်ဂျာလို့ မသိကြပါဘူး..။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကျော် ကတည်းက အဲဒီဒေသတွေက ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂါလီတွေရဲ့ ရခိုင်တွေကို အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ သတ်ဖြတ်မှုတွေ၊ ကို ပြည်ပက ဘယ်မီဒီယာ ဘယ်သတင်းဌာကမှ အဖက်လုပ်ပြီး ဖော်ပြခဲ့တာ မရှိပါဘူး..။ ဖော်ပြခဲ့ရင်တောင် ရိုဟင်ဂျာလို့ မသုံးခဲ့ပါဘူး..။ နောက်ပြီး ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာ ရခိုင်အမျိုးသားတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Arakan ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ကန့်ကွက်တဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပက အခမ်းအနားတွေ၊ ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းကြောင်း ရှင်းလင်းပွဲတွေကို ဘယ်မီဒီယာကမှ ရေးသားဖော်ပြခြင်း မရှိတဲ့အတွက် ရခိုင်အမျိုးသားတွေက လက်လှမ်းမီရာ သတင်း website လေးတွေမှာနဲ့ youtube မှာပဲ တင်ခွင့်ရခဲ့တာ ကြာပါပြီ..။ အဲဒါတွေဟာ .. ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ..။
အဲဒီလို အဖက်ဖက်က လွှမ်းမိုးထားတဲ့ မီဒီယာတွေ၊ NGO တွေရဲ့ယုတ်မာကောက်ကျစ်မှုတွေကြောင့် အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်မခံတဲ့ Rohingya Campaign ဟာ ဘယ်တော့မှ မပြီးဘူးဆိုတာကိုလည်း ပြောပါရစေ..။
ဒေါက်တာဇာနည်က ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ရေးလုပ်နေသူတွေကို .။ Neo Fascist ဆိုပြီးတော့ ဘာထောက်အထားမှ မရှိဘဲ ငါ့စကားနွားရ ပြောခဲ့ပါတယ်.. ။ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ယူဆသုံးသပ်တယ်ဆိုတာ ခိုင်မာတဲ့အထောက်အထား ရှိဖို့လိုကြောင်း ပညာရှင်အမည်ခံထားတဲ့ ဒေါက်တာဇာနည် ပိုသိမှာပါ..။ အမှန်တော့ Rohingya တွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေက Neo Fascist တွေမဟုတ်ဘူး..။
ဒေါက်တာဇာနည် စွပ်စွဲသလိုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လည်း ရိုဟင်ဂျာကို Terrorist လို့ တိတိကျကျ ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ စွပ်စွဲလိုက်ပါတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ ခံယူချက်ကလည်း Anti Terrorism ဖြစ်သွားပါပြီလို့ ရဲရဲကြီးပြောချင်ပါတယ်..။ ဒေါက်တာဇာနည် ရိုဟင်ဂျာကို ထောက်ခံနေတာဟာလည်း Terrorism ကိုထောက်ခံတာနဲ့ အတူတူပဲလို့ ပြောချင်ပါတယ်..။
အဲဒီတော့ ဒေါက်တာဇာနည်ကို တစ်ခုမေးချင်တာက ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ terrorist ဟုတ်သလား၊ ဒါမှမဟုတ် terrorist ဖြစ်ခဲ့သလား ဆိုတာပါပဲ..။ အဲဒါကို ကြိုက်တဲ့ အထောက်အထားနဲ့ ပြန်လည်ချေပဖို့ ... ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်..။
မည်သူမဆို share နိုင်ပါတယ်..။
Melven Than, Yeyint Nge, Hlaing Bwa and 134 others like this.
အချို့တွေကတော့ ကရ်ှမီးယားနဲ့ အချို့ကတော့ ချေချင်းညှာမှာရှိကြတဲ့ အစ္စလာမ်မစ် စစ်ရေးအဖွဲ့များစီသို့ သွားရောက်ကြပါတယ်.... ဒါကတော့ ဘင်္ဂလားမှာ ရှိကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ Camp တွေကနေ သင်တန်းတက်ပြီး ဆက်လက်ခြေဆန့်သွားကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ လက်နက်ကိုင်များ အကြောင်းက...ို ရေးသားထားတဲ့ အထဲက တစ်ခုပါ။
ရှေ့ထွက် ရိုဟင်ဂျာ မျိုးချစ်အဖွဲ့ RSO ကို တပ်သားသစ်အဖြစ် ၀င်ရောက်ခြင်းအတွက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တာကာ 30,000 (US$ 525) ခန့်နှင့် လစာအဖြစ် တစ်လလျင် တာကာ 10,000 ရရှိပါတယ်။ တိုက်ပွဲအတွင်း သေဆုံးသွားသူ မိသားစုအတွက် တာကာ 100,000 ပေးမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။
ဒါတွေဟာ ရန်းတုတ်တွေ မဟုတ်ပါ......See More
Thursday at 5:58pm ·
Maung Maung Than တပ်ရင်း(၅)ထင်ပါ့ တိုက်ပွဲတွေ အောင်ဆန်းသူရိယလှသောင်းစာအုပ်မှာ ပါတယ် ရှာကြည့်ကြပါ
Daiwa Desai please ..let me share
Thursday at 6:10pm ·
Kyaw AungီZar Ni ဆိုတဲ့ကောင်ဘာကောင်လဲ။ ရခိုင်ကိုရိုဟင်ဂျာတော့လာမလုပ်နဲ့မင်းမျက်နှာကိုဖြုတိရိုက်ပစ်မယ်။
Thursday at 6:18pm ·
Kyaw Aung ခွေးမသားတွေပြည်တွင်းကောပြည်ပကောကုလားတွေအာုးလုံးကိုပြောလိုက်မယ်မင်းတို့သေချင်းဆိုးနဲ့သေသွားမယ်ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်
Thursday at 6:19pm ·
Than Tun ခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားတွေ ရှာဖွေရေးသားနိုင်တာ လေးစားပါတယ်ဗျာ။ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ် ကိုရန်အောင်ရေ။ share လိုက်ပြီဗျာ။
Thursday at 6:28pm ·
Linn Yaung ကုလားတွေကို ဇာတ်သိမ်းပေးသင့်ပြီ
Thursday at 6:35pm ·
Mg Shoke အချက်အလက် ကို အစ်ကို ပြောသွားတာပဲ ကြိုက်တယ် ဗျာ .. share လဲ share သွားတယ် . . နေ့စဉ်ကို ဒီ သတင်းကို share ပေးမယ် .. ခက်တာက အခု ဒီကိစ္စတွေကို အွန်လိုင်းသုံးတဲ့ လူတစု က လွဲပြီး အခြား ပြည်သူတွေ မသိကြတာခက်တယ် .
Arkar Soe share ခွင့်ပြုပါ...
Thursday at 7:00pm ·
Than Tun ကြည့်စမ်းဗျာ။ ကလေးပေါက်စလေးကိုတောင် ချမ်းသာမပေးဘူး။ ရက်ရက်စက်စက်သတ်ထားကြတာ။ ရခိုင်မှာ ဒါမျိုးတွေ ဘယ်လောက်များနေပြီလဲ။
Thursday at 7:04pm ·
Par Par Gyi
၂၀၁၁ ဇူလိုင် ၃၀ ရက်နေ့ က စစ်တကောင်းဒေသ ရခိုင်မိန်းကလေးကို အဓမ္မပြုကျင့်မှု၊ အဓမ္မပြုကျင့်မှုမှ မိဘနဲ့ ကလေးငယ်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုဟာ ဒီနေ့ထိဆို (၄) လ မပြည့်သေးတဲ့အပေါ်၊ ဒီသတင်းဟာ ဘင်္ဂလီ (ခေါ်) ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ လူမဆန်စွာ အဓမ္မပြုကျင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ...မီဒီယာသတင်းဌာနတွေက ဖော်ပြခြင်းမရှိခဲ့တာ ဘာကြောင့်လဲ...
ရခိုင်ဒေသထိ ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်လို့ ငြင်းမလား၊ ဒီထက်အခက်အခဲရှိတဲ့ နေရာဒေသတွေမှာတောင် အချိန်နဲ့ တပြေးညီ သတင်းတွေ ရရှိဖော်ပြခဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ မီဒီယာတွေ... အခု လူမဆန်တဲ့ ဘယ်လိုမှ လက်သင့်ခံလို့ မရတဲ့ အကျည်းတန်လှတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို ဥပက္ခာပြုထားပြီး ရိုဟင်ဂျာကို မြန်မာပြည်ထဲ သွတ်သွင်းဖို့ ထောက်ခံခဲ့ကြတဲ့ မီဒီယာတွေ ရှက်တတ်ရင်ဗျာ... ကိုယ့်ကိုယ်ကို မလှုံတဲ့စိတ်လေးများဖြစ်ပေါ်မိရင်ဗျာ..
ဆက်ပြောဖို့ ထိုက်တန်တဲ့ စကားလုံးတောင် ရှာမတွေ့ဘူး..See More
Thursday at 7:05pm ·
Phoe Nyan Share ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ
Shwe Rocky အသားထဲက လောက်တွေကို လည်းသတ်သင့်တယ်......။
Thursday at 8:00pm ·
Mg Myo Gyi သီတင်း ဂျာနယ်တွေမှာ လွတ်လပ်စွားရေးသားပိုင်ခွင့်ရှိတော့မယ်လို့ ကြားပါတယ် တကယ်လို့သာ လွပ်လွပ်လပ်လပ်ရေးသားပိုင်ခွင့်ရလာရင်တော့ ဒီသီတင်းလေးတွေကို ဂျာနယ်တွေကနေတဆင့် ပြည်သူတွေဆီကို ဖြန့်ဝေပေးစေချင်ပါတယ် ............ ရခိုင်ကရခိုင်ပါပဲ မွတ်ဆလင်ဖြစ်စရာဘာအကြောင်းတရားမှ မရှိပါဘူး ဒါ.. မြန်မာလူမျိုးတွေကိုဆော်ကားထိပါးနေတာပါ လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူး .........................
Ko Tat ရက်စက်ကြတာ ကမ်းကုန်ဘဲ..။ လူမသိသူမသိသေသွားကြတာတွေလဲရှိအုံးမှာ..။
Thursday at 8:18pm ·
Aye Myamya Thank Ko Yan Aung.
Thursday at 8:33pm ·
လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ .. လူသားတိုင်းမှာရှိတာပါ..။ ရိုဟင်ဂျာတစ်အုပ်စုတည်းမှာပဲမရှိပါဘူး.. တစ်နေ့က ဘင်္ဂါလီရွာသားတွေ ၀ိုင်းသတ်လို့ သေဆုံးသွားတဲ့ နစက(နယ်စပ်လုံခြုံရေး) နှစ်ယောက်ဟာလည်း လူသားတွေ ဖြစ်သလို၊ ဒီကလေးငယ်နဲ့ မိသားစုဟာလည်း လူသားတွေပါပဲ..။
ပြည်တွင်းကရခိုင်အမျိုးသားတွေက ၀င်လာတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေကို အဲဒီလို မိသားစုလိုက် သတ်တာ၊ မုဒိန်းကျင့်ဖို့ ကြိုးစားတာတွေ့ဖူးပါသလား..။ စစ်တကောင်းက ဘင်္ဂါလီတွေကသာ သူ့နယ်ကိုလာရောက်အချေချတဲ့ ရခိုင်တွေကို အဲဒီလိုသတ်တာပါ..။
အဲဒါကြောင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ ပေတံနဲ့ တိုင်းမယ်ဆိုရင် နှစ်ဖက်စလုံးကို တိုင်းပါ..။ ကိုယ့်ရဲ့ Human Right ဟာ သူတပါးရဲ့ Human Right ကို စော်ကားထိပါးမယ်ဆိုရင် ဒီလို ပြဿနာတွေဖြစ်လာမှာပါ...။ လူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်းနဲ့လဲ အကြုံးမ၀င်ပါဘူး..။See More
Thursday at 8:45pm ·
Thant Zin ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါပဲနဲ့ အချက်အလက်တွေကိုကိုးကားပြီးရေးသားထားတာဖြစ်လို့ အင်မတန်မှသဘောကျမိပါတယ်။ လေးစားပါတယ် ကိုရန်အောင်။
Paing Soe Oo ဘာသာရေး၊လူမျိုးရေး အဓိကရုန်း ဖြစ်စေမယ့် စာတွေက လွဲပြီး ကျန်တာ ကို ပို့လိုက် မယ်ဆိုရင်တော့ ဂျာ နယ်တွေ က ထည့် ပေးလောက်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော် တို့ တတွေ အသိရှိမှ သူတို့ သမိုင်းလိမ်တာ မခံရမှာ ။ အခုက ဘယ်လို ဖြစ်နေလည်းဆိုတော့ အသားထဲ က လောက်တွေ က ပါ ရော ပြီး သမိုင်း လိမ်ပေးနေကြတာ ဆိုတော့ ရင်နာ ဖို့ တော့ အကောင်းသား ဗျာ..
Thursday at 8:57pm ·
Paing Soe Oo ကိုရန်အောင် ကို ကျေးဇူး ဗျာ..နော်..အကို TAG လုပ်မှ ဖတ်မိတာ ။ နောက်ပြီး ဆိုဒ် မှာ ပြန်တင်ဖို့ သယ်သွားပါတယ်ဗျာ..
Ko Tint Good explanation.
Naing Win ဒီကိစ္စနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ဂရုပ်လေး တစ်ခုကို လုပ်စေချင်တယ်ဗျာ။ သတင်းအချက်အလက်တွေ၊ သမိုင်းအထောက်အထားတွေနဲ့ အသိပညာရှင်တွေရော၊ နောက်လူငယ်တွေပါ ဆွေးနွေးစေချင်လို့ပါ။ လုပ်တတ်သူများ အဖွဲ့လေးတဖွဲ့ လုပ်စေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် မလုပ်တတ်လို့ပါ။
Thursday at 9:15pm ·
Chin MoKu Please let me share.
Thursday at 9:22pm ·
Tampa Wadi ကျွန်တော်လည်း ဆိုဒ်ထဲကို ယူသွားမယ်ဗျာ.. ကျေးဇူးပါ ကိုရန်အောင်ရေ..
Kyaw Aung အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုမြန်မာပြည်တွင်းသွင်းဖို့လုပ်နေတာလား။
Thursday at 10:00pm ·
Kyaw Aung ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကထုတ်ဖော်ရေးသားကြပါ။ ပြည်သူမျူားသိရှိအောင်။ဘာလို့ငြိမ်နေကြတာလဲ
Kyaw Aung နိုင်ငံအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုဖို့မပြောနဲ့ကုလားတွေ့ရင်မျက်နှာဖြတ်ရိုက်ချင်နေတာ
Kyaw Aung အဲလိုရိုက်ခဲ့ပေါင်းများပြီး.လေ့လာကြည့်ရင်အကြမ်းဖက်သမားဟာကုလားဘဲ။ဘယ်လူမျိုးမှအသေခံဗုံးဖောက်တာမရှိဘူး။ ကုလားဘဲလုပ်တာအစွန်းရောက်တွေဘဲ
Thursday at 10:07pm ·
Phyo Wai Aung I want to SHare Ko Yan Aung
Thursday at 10:23pm ·
Phephe Gyi ဒကာရန်အောင်ကို အထူးအထူးကျေးဇူးတင်တယ်။ ဒီလိုအဂတိမပါပဲအထောက်အထားပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့တင်ပြသွားတာကို သဘောကျတယ်။ ခက်တာက ဒီအကြောင်းတွေကို ပြည်သူတွေအကုန်လုံးသိစေချင်တယ်။ သိအောင်လည်း ကြိုးစားပေးကြပါလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
Thursday at 10:34pm ·
နောက်ဆုံးရရှိသည့်သတင်းများအရ ဘူးသီးတောင်တွင် အနိုင်ရခဲ့သော NDPD (ရိုဟင်ဂျာပါတီမှ) လွှတ်တော်အမှတ် (၂) ဦးသည် ဟန်ညောင်ဝေရောက်နေသည့်အချိန် ၂၆-၁၀-၂၀၁၁ နေ့က လွတ်တော်တွင် ရိုဟင်ဂျာအား လူမျိုးစုတစ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုသည့် အတွက်လည်းကောင်း..... မဲဆွယ်စည်းရုံးချိန်တွင် တိုင်းရင်းသားထဲတွင်မပါသော (အခြားလူမျိုး) ဟူသည့် အသုံးအနှုန်းဖြင့် စည်းရုံးကာ အနိုင်ရပြီး ..လွှတ်တော်အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာသည့်အတွက်လည်းကောင်း အမျိုးသားလွတ်တော်မှ လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်..။See More
Ye Tar ဒီသတင်းကို အင်္ဂလိပ်လို ရေးပြီး တင်ရင် လည်းပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ခင်ဗျ။
ကိုရန်နိုင်ကို အထူကျေးဇူးပါ ဒီလိုသေသေချာချာသိခွင့်ရလို့။
San Lin Latt Everyone have responsible.
Tin Ohn Mar Zaw ဆောင်းပါးထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ဓါတ်ပုံတွေ က တော်တော် ရက်ရက်စက်စက်ပဲ...ဘာဖြစ်လို့ များ ဒီဓါတ်ပုံတွေ ကို သက်ဆို င်ရာ က ဖုံးထားရတာလဲ....
Tin Ohn Mar Zaw ရခိုင်လူမျိူးတွေကို အင်မတန်လေးစားပါတယ်...မျိူးချစ်စိတ်အရမ်းကြီးတယ်....ဘူးသီးတောင် မောင်တောဘက်မှာတော့မူဆလင်တွေ အတော်များပါတယ်...ဒါပေမဲ့ဘယ်ရခိုင်လူမျိူးအစစ်ကမှ သူတို့ ကို လူရာမသွင်းပါဘူး ရိုဟင်ဂျာဟာ ရခိုင်လို့ဆိုချင်နေတဲ့ လူ တွေ ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုရော ရောက်ဘူးကြရဲ့လားမသိဘူး
Thaw Zin Share သွားပြီဗျာ
Kyi Wah HtunှုI need to takeatime to read it properly. thanks to tag me.
Kyaw Aung Tin Ohn Mar Zaw ပြောသလိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကုလားကိုခွေးတစ်ကောင်လောက်တောင်တန်ဖိုးထားပြီးဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူး
Kyaw Aung အဲဒါအမှန်တစ်ကယ်ဘဲ Human Right တွေဘာတွေလာလုပ်မနေနဲ့မျိုးကန်းကုန်မယ်
Kyaw Aung အဲဒီခွေးသားတွေကိုယူတဲ့မြန်မာမတွေကရှိသေးတယ်. ယူစရာရှားလို့
Tin Ohn Mar Zaw ဟုတ်ကဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အနောက်ဘက်က ရခိုင်ပြည်နယ် နဲ့ရခိုင်လူမျိူးတွေက တံတိုင်းတခုလို ကာကွယ်ထားကြတယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်...အရှေ့ နှင့် အရှေ့ မြောက်ဘက် က စည်းရိုးတွေကတော့ ကြာပေါ့....ကျိူးခဲ့တာ
Myanmar Zarmanie Maung Zarni myarayay lote loadi kg bar kg ma ma hote buualar kar kg lote sar nay tae kg စာရင်းထဲ ထည်မနေနဲ
Nay Min အသုံးမကျတဲ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဦးနု ၊ တိုင်းပြည် ဘာသာ သာသနာကို အာဏာနဲ့ လဲစားခဲ့တဲ့ ဦးနု စိတ်ပျက်စ၇ာပါပဲ ရှစ်လေးလုံး အရေုးတော်ပုံ အတွင်းမှာ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို ကာကွယ်ပေးသွားတဲ့ လုံထ်ိန်းတွေကိုတော့ လေးစားမိပါတယ် ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် ၇ဲဘော်တို့ရေ
အဓိက လိုအပ်နေတာကတော့ တိုင်းပြည်က အာဏာနဲ့ ပြန်လည်တားမြစ်ပေးဖို့ ဒီကိစ္စတွေကို ဖြေ၇ှုင်းပေးဖို့ပါ ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ လူတွေပိုသိအောင် ကြိုးစားကြ၇မှာပါ
Nay Min အကိုရေ ကျွန်တော်ကတော့ ရှိသမျှ Group တွေမှာ အကုန်လိုက်ပြီး Share လိုက်ပြီ
ThuYa Ye Aung ဘင်္ဂလီကုလားက ၊ရခိုင်မွတ်ဆလင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး
Khin Zaw အသားထဲကထွက်တဲ့လောက်ကောင်တွေတို့နိုင်ငံမှာများလာပြီ၊သတိထားရတော့မယ်။
Maverick Aung တေချင်းဆိုးနဲ့တေကြပါစေ ၇ိုဟင်ဂျာတွေ အလာလာကြီး၇ိုက်ပါစေ
Posted by Anti Rohingya (Bengali Muslim) - Anti Terrorist at 10:16 AM
Labels: ဓာတ်ပုံ, သတင်း, သမိုင်းဆိုင်ရာ, ဆောင်းပါး, ပေးစာ
နိုင်ငံခြားသတင်းရေဒီယိုများပေါ်ယုံကြည်မှု မရှိတော့ပါ။ဖေဖေ အမြတ်တနိုးနားထောင်တဲ့ရေဒီယိုလေးကို မပစ်ခွဲရက်ပါ.။ဒီလို အဖြစ်အပျက်တွေကို တင်ပြခြင်းမရှိဖုံကွယ်ထားခြင်းကို ဖေဖေ့ကို ပြောပြရဦးမည်.။
တသက်လုံး အားကိုးတကြီး နှင့်နားထောင်လာသည့် အသံလိုင်း bbc, dvb, rfa...အားလုံးကိုမုန်းသည်...။ရွံ့သည်...။မြန်မာပြည်ကို တကယ်တန်ဖိုးမထားကြပါ။ ဒီအကောင်တွေမြန်မာပြည်ထဲဝင်လာရင်..နောင် ၁၅ နှစ် မြန်မာလူမျိုး မူဆလင်များသာ ကြီးစိုးသွားပေလိမ့်မည်။....၄င်းကိစ္စ သည် လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး နှင့်ပတ်သတ်နေပါသဖြင့် မြန်မာပြည်အနာဂတ် အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်..။ ကျေးဇူးပြုပြီး အဖြစ်မှန်ကို ဖုံးကွယ်ခြင်းမရှိ ပြန်လည်တင်ပြပေးပါရန်တောင်းဆိုခြင်ပါသည်။
ကျွန်တော်ရဲအဖိုး၊ အဖွားတွေဟာ 1942 ခုနှစ်က ဒိုင်နာစပူ ကုလားသတ်လို့ ပြေးခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေထဲမှာ အပါအ၀င်ပါ။ အဖွားဟာအခုဆိုရင် 83 နှစ်ရှိပါပြီ။ စကားစပ်မိတိုင်း သူတို့ ငယ်ငယ်တုံးက ဘယ်လိုအသက်လုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို ပြောပြလို့ ကျွန်တော် မှတ်မိနေပါတယ်။ 1942 အင်္ဂလိပ်တွေက မြန်မာပြည်က အထွက် ဂျပန်တွေက မြန်မာပြည်ထဲကိုအ၀င် ဒီစပ်ကြားကာလ မှာ ကုလားဆိုး၊ကုလားယုတ် အိမ်မှာ ခိုင်းဖို့ခေါ်ထားတဲ့ ကျွန်တွေဟာ မောင်တောတစ်မြို့လုံးကိုသတ်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကြတာပါ။ အဖွားဟာ မောင်တောမြို့ နဲ့ (2)မိုင်ခွဲလောက်သာဝေးတဲ့ ရွာကလေးကပါ။ သူတို့စပြီးလုပ်ရှားနေပြီ အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ ရွာက ရွာသူကြီးဟာ မောင်တောမြို့ကနေ သူတို့ရွာကို ကာကွယ်ဖို့ ဆိုပြီး မောင်တောရဲစခန်းက ရဲသား အကူအညီတောင်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ မောင်တောမြို့ကို ရဲသား အယောက်(၂၀)ကျော်ခန့်နဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရွာသူ/ရွာသားတွေဟာ နေ့/ညမပြတ် သတိဝိရိယနဲ့ ကင်းလှည့်ပြီး နေခဲ့ရပါတယ်။ ၂(မိုင်)ခွဲလောက်ရှိတဲ့ မောင်တောမြို့ က ရဲသားအကူအညီသွားတောင်သူနှစ်ယောက်ဟာ နောက်သုံးရက်ကြာတဲ့အခါမှာ ရဲသား(၃)ယောက်နဲ့ အတူပြန်လာပါတယ်။ သူတို့ နဲ့အတူပါလာတဲ့သတင်းဆိုးက မောင်တောတစ်နယ်လုံးက လူတွေကကို ကုလားတွေ လိုက်သတ်နေပြီဆိုတာပါဘဲ။ ရဲသား(၃)ယောက်မှာ သေနတ်က(၂)လက်၊ လုပ်သေနတ်က(၁)လက် ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ ချင်းမှာ ဘဲ အဖွားတို့ ရွာသူရွာသားတွေဟာ သူတို့ ရဲ အိုးအိမ်၊ လယ်မြေတွေကို အကုန်ပြစ်ပြီး အ၀တ်တစ်ထည် ကိုယ်တစ်ခုနဲ့ မောင်တောမြို့ကို သွားခဲ့ကြပါတယ်။ သွားတဲ့အခါမှာ ကလေး၊ရွယ်အို၊ အမျိုးသမီးများကို လူအုပ်ရဲအလယ်ကထားပြီး၊ အမျိုးသား ဓါးကိုင်နိုင်သူအားလုံးဟာ ဘေးပတ်ပတ်လည်က ဓါး၊လှံ၊၀ါးချွန် လက်နက်တွေကိုင် ကာရံပြီး လမ်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ လယ်ပြင်ထဲက သွားခဲ့ပပါတယ်တဲ့။ မောင်တောမြို့ကို ရောက်တဲ့အခါမှာ နယ်တိုင်းက လာတဲ့ရခိုင်သားများ ဟာ ခိုကိုးရာမဲ့ဖြစ်နေကြပြီး မောင်တောမြို့ မြို့မဘုန်းကြီးကျောင်းက လောကမာရ်ဇိန် ထိုင်တော်မူဘုရားကြီးမှာ ဆုတောင်း၊ ဘုရားရှိခိုးကြပါတယ်။ နောက်မှ ရေးပါဦးမယ်
အဖွားရဲ ကိုယ်တွေ့ ကုလားအကြောင်းမှ
ဘုရားကြီးရဲ့ရှေမှောက်မှာဘဲ သားသမီးသေလို့ ငိုတဲ့သူ၊ အမိ၊အဖ၊ညီအစ်ကိုမောင်နှမသေလို့ ငိုတဲ့လူ၊ သားပျောက်တဲ့ အမေတွေ၊ မိဘမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့သားသမီးတွေနဲ့ ပြည့်ကျပ်နေပါတယ်။ ဘူးသီးတောင်ကိုသွားမယ်လို့ အရင်အစီစဉ်အတိုင်း သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတုန်းမှာဘဲ မိုးဟာ အရင်တစ်နေ့ ကရွာခဲ့တာထက်ပို သည်းသည်းမည်းမည်း ရွာချခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဘူးသီးတောင်ကို မသွားဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူး။သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ သတင်းရတာက မောင်တော-ဘူးသီးတောင်လမ်းက တောင်ခေါင်းကြီး(လှိုဏ်ခေါင်းကြီး)မှာ ကုလားတွေဟာ မောင်တောကလာတဲ့ လူတွေကို သတ်ဖို့စောင့်နေကြတယ်ဆိုတာပါဘဲ။ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ ဒီအဖြစ်ဆိုးသတင်းကိုကြားတဲ့အင်္ဂလိပ်ဗိုလ်လို့ပြောပါတယ် အဲဒီလူပြီးတော့ စက်ရှင်တရားသူကြီးတို့ရဲ့ အကူအညီနဲ့ နတ်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကိုကူးပြီးတော့ ဒိုင်နာစပူကိုသွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တကယ်လို့ ဘူးသီးတောင်ကို ကိုသွားခဲ့ရင် ကျွန်တော်ဟာ မွေးလာစရာအကြောင်းကို မရှိနိုင်တော့ပါဘူး
ဒါ အဖွားပြောပြတဲ 1940ကျော်က ကုလားများရဲ တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရမှုပါဘဲ။
ကျွန်တော်ဟာ သမိုင်ပညာကို နားမလည်ပါ။ အဖွားပြောပြသလိုရေးထားတာပါ တစ်ချို့အချက်အလက်များမှာ ကွဲလွဲမှုများရှိခဲ့သော်လည်း ခွင့်လွတ်ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
အေမြန်မာပြည်မှာတိုင်းရင်းသား ၈မျိုး ဘဲရှိတယ် ၈မျိုးထက်ပိုတဲ့ အမျိုးတွေကိုအ ကုန်မောင်းထုတ်လိုက်
အမျိုးဘာသာ သာသနာကို မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း စောင့်ရှောက်ရမှာပါ။ ပြည်သူတိုင်း နားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မိမိတို့ လက်လှမ်းမှီသလောက် လူထုကို အသိပေး ပညာပေးတွေ လုပ်သင့်ပါတယ်။
မိုးသီးဇွန်က အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မူဆလင်ပါ။
ZarNi did not earnaPhD. See below: